Eudoxie Yao wuxuu wali ku sii dayaayaa shabakad cusub - teles relay
Eudoxie Yao ayaa wali ku sii daadaxaysa shabakada shabakad cusub
Xaqiiqdii, gobaraba wali ma uusan dhameystirin sameynta birta ee shabakada. Kardashian kim African-ka ah ayaa hadalo cusub ka sameysay boggeeda Instagram oo horeyba u ruxey shiraaca dhan walba.
Eudoxie Yao wuxuu dib uga fiirsaday noloshiisa si ay taageerayaashiisu uga warqabaan xaqiiqada noloshiisa ama ka yar. Waxay ku bilaabatay iyada oo muujineysa inaysan mar dambe isu arkin qof caadi ah, laakiin ay tahay xiddig u qalma tixgelin ugu yaraan.
Waxay si toos ah u sii wadday, iyada oo ku faaftay caannimadeeda sii kordheysa ee dibedda. Doxy Rover, maxaa yeelay tani waa naaneyska ay nafteeda u bixisay ka dib markii ay heshay Range Rover labaad, waxay xustay in xiddigo waaweyn oo ka socda qaaradaha badan ay rabeen inay la kulmaan.
Arrintan, Doxy Rover ayaa soo xigtay qaar ka mid ah xiddigo waaweyn oo codsaday joogitaankiisa xafladaha ciida. Iyagu waa Chris Brown, Rick Ross iyo kuwa kale oo badan.
Sidaa darteed waa in dib loo soo xusuusiyaa in farshaxan yaqaanka xirfadleyda ahi uu ku wargaliyay warbaahinta guud sida "Qorraxdu "," Mails Daily ". Saameeyahu wuxuu sheeganayaa in dhamaan warbaahinada waaween inay kahadleen qodobada. Waxay ku saxday ereyadeeda iyada oo intaas ku dartay “Mareykan iyo Jabaanku waxay u yimaadeen inay iiga warbixiyaan.”
Xiddiga ayaa doonaya reer Ivorians, oo la siiyay xaqiiqadan, inay ixtiraamaan iyada oo ay joojiyaan odhaahda "Beenta". Waxaan sugeynaa inaan aragno bal digniintiisu waxay yareyn doontaa dhaleeceynta dadka isticmaala internetka ay isaga u jeediyeen.
Maqaalkani wuxuu ugu horreyn u muuqday: https://afriqueshowbiz.com/cote-divoire-eudoxie-yao-fait-encore-de-nouvelles-revelations-croustillantes-sur-la-toile/
Qoyska DJ Arafat ayaa garaacay baroordiiq cusub